IFTAR PROJECT MOGADISHU 2015 – HARO
Hay’adda Humanitarian African Relief Organization (HARO) ayaa Sakaatul Fidri ah ka Qaybisay Gobolka Banaadir gaar ahaan Degmooyinka Wadajir iyo Hodan; waxaana Sakaatul Fidrigan loo Qaybiyay Qoysas Dan-yar ah iyo kuwo dhibaateysan, iyadoo Gargaarkaan uu ka koobnaa Bur, iyo Bariis.
Sakada Hay’adu Qaybisay ayaa waxaa soo ururiyay Walaalaha Muslimiinta ah ee ku nool Waqooyiga Ameerika; iyagoo ugu talp-galay in la siiyo dadka ku danta yar ee ku dhibaateysan Muqdisho, iyadoo intii ay socotay qaybinta Deeqdaas ay Goob-joog ka ahaayeen Mas’uuliyiin ka tirsan xafiiska HARO ee Soomaaliya iyo Xubno ka yimid dalka Mareykanka.
Tan iyo markii ay dhalatay bisha Ramadaan Hay’ada HARO waxay ku howllanayd mash-ruuca ay ugu magac-dartay Afurinta dadka aan heli karin waxay ku afuraan kuwaasoo isugu jiray rag iyo dumar.
Ugu dambeyn, Dadkii ka faaideystey Sakaatul Fidriga iyo Afurintii Ramadaanka ayaa u mahadceliyay Hayadda HARO iyo Muslimiinta Waqooyiga Ameerika, iyagoo codsaday inay mar kasta gargaarkan la garab-taagnaadaan.